Thenga i-RAD140 (Testolone) ipowder: Iyintoni i-RAD140 esetyenziswayo? | AASraw
/Blog/RAD140 , Testolone/Thenga i-RAD140 (Testolone) ipowder: Iyintoni i-RAD140 esetyenzisiweyo?
ezaposwa ngomhla 04 / 20 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo RAD140, Testolone.
1.RAD140 (Testolone) ipowder
2.Yintoni i-RAD140 (Testolone) ipowder
3. Yintoni i-SARMS powder
I-4.II-SARMS i powder i-steroid?
5.History ye-RAD140 (Testolone) ipowder
I-6.Osebenza njani i powder i-RAD140 (Testolone)?
7.Yintoni i-powder RAD140 esetyenzisiweyo
8. Ngubani onokuzuza kwi-RAD140 (Testolone) powder
I-9.RAD140 powder eqhathaniswa ne testosterone
10.Usebenzisa njani i-RAD / Testaoone, i-RAD140 isilinganiso
11. Imiphumo emibi ye-RAD140 / i-Testolone side effects
I-12.RAD140 i-powder isiqingatha sobomi / i-Tesolone isiqingatha sobomi
Uphando lwe-13.RAD140 yophando / uvavanyo lwe-Testolone
14.RAD140 powder ngaphambi nangemva
15.RAD140 ipowder powder nge YK11 powder
I-16.RAD140 yokubuyisa ipowder
17.Buy i-RAD140 (testolone) ipowder esuka kwi-AASraw
I-Raw RAD140 (Testolone) ipowder Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-RAD140 (Testolone) ipowder
1. I-RAD140 powder (Testolone powder)
Igama leKhemikhali: RAD140 powder, I-Testolone powder
Inombolo yeCAS 1182367-47-0
Umenzi we powder RAD140: www.aasraw.com
Isisindo somzimba: 393.826https: //www.aasraw.com/products/RAD140-Testolone/
Umbala: I-powder yelitini
I-Pacakge: isikhwama se-foil okanye ukwenza ngokwezifiso
Ukuhanjiswa: kwiiyure ze-12 emva kokuhlawula, imifanekiso yepakethi kunye no-Tracking No. ekhoyo emva kokuba ithunyelwe ngaphandle
Indlela yokuhlawula: iNtshonaUnion, MoenyGram, iBitocin, ukudluliselwa kweBhanki
2. Yintoni i-RAD140 (Testolone) ipowder
I-RAD-140 powder, eyaziwa nangokuthi i-Testolone powder, yi-SARM, i-modorator ye-androgen ye-receptor. Ukubangela ukwanda okugxininisekile kwimizimba ye-muscle, kunye nokuphucula ukunyamezela kunye namandla ombonakaliso ngabanye. Isilwanyana sithatha ukukhuthaza ukukhula kwemisipha, ngaphandle kokubangela umonakalo onobungozi kwindlela yesibindi, inkqubo yexhala kunye nokuzala. I-RAD 140 inegalelo eluncedo kwi-metabolism kwaye ikhuthaza ukuhlaziywa kwezicubu ezinobungozi. Akukho ncinane ingozi yezicubu ezinamahlunu ezingenazo i-androgen. Enyanisweni, i-RAD-140 inomlinganiselo ophezulu we-anabolic kumsebenzi we-androgenic kwanoma yiyiphi i-SAR ifunyenwe, i-90: 1. I-Testosterone ine-anabolic kwi-androgenic ratio ye-100: 100. Oku kuthetha ukuba ipolisi ye-Testolone ifana ne-anabolic njenge testosterone ngelixa i-1 / 100th nje nge-androgenic. Oku kukhangeleka njengokuba ubuninzi beempembelelo ezimbi ze testosterone, kuquka imiphumo yesibindi, izintso kunye neprotate, zivela kwimiphumo yayo ye-androgenic.
3. Ziziphi iiSARMS
SARMS abakwiklasini yeerrogen receptor ligands ezibophelela kwi-androgen receptors. Baqala ukuphanda kwi-1940 ngokuguqulwa kwemolekyuli ye testosterone. Ngokuqhelekileyo, zaphuhliswa ukunceda ukunciphisa ukukhuluphala, ukuphucula impilo yeethambo, ukuphucula izifo, nokukhusela ukuxhatshazwa kwemisipha. Ekubeni i-RAD140 (i-Testolone) ipowder ingowesigaba seSARMS, inemiphumo efanayo naleyo ye-anabolic steroids, kodwa ngaphandle kwemiphumo emibi ngenxa yokuba iyakwenza kwi-androgen receptors ngendlela ekhethekileyo.
4. Ngaba i-SARMS i-steroid?
I-RAD140 (Testolone) ipowder 1182367-47-0
I-LGD-4033 / VK5211, iLigandrol 1165910-22-4
Ngaba i-SARMS i-steroid? I-SAR imele i-modorator ye-androgen ye-receptor ekhethiweyo, kwaye luhlobo lwesichengechunge esichaphazelekayo ngokwemichilo efana ne-anabolic steroids.
5. Imbali ye-RAD140 (Testolone) ipowder
I-RAD140 powder okwamanje iphuhliswa yinkampani yamayeza eRadio. Ukufunyanwa kwalo ekuqaleni kwakushicilelwa ekuqaleni kwi-2010, oku kuthetha ukuba izifundo zilinganiselwe. Nangona kunjalo, izifundo zokuqala, iingxelo zenkampani kunye nokuhlaziywa kwabasebenzisi be-anecdotal baye bathembisa kakhulu ukuseka isisulu ngaphandle kwemiphumo emibi ye-anabolic steroids.
Abadlali bezakhiwo zokuzonwabisa nabanomncintiswano nabanye abanomdla, ukuphucula kokubili ukusebenza kunye neziphumo zomzimba kuyinjongo efanayo.
Kwabaninzi balaba babaleki, abaxhasi be-androgen receptor, okanye ii-SARM, banceda. IiSARM zinika indlela efanelekileyo kunye nekhuselekileyo yokuncedisa abo kwimidlalo yemidlalo kunye namandla. IiSARM ziye zazuza ekuthandeni kule minyaka elishumi edlulileyo. Oku kungenxa yokukwazi kwabo ukubonelela iziphumo ezifanayo kwi-anabolic steroids ngaphandle kweyiphi na imiphumo emibi echaphazelekayo eyenziwa yi-steroids.
I-RAD 140 / i-Testolone powder, enye ye-SARM ezitsha ezikhoyo. I-RAD 140 iboniswe ukwandisa ukunyamezela kunye nesantya kunye namandla. Ikwaxhasa kwakhona ukukhuliswa kwamascle nokuphucula.
6. Umsebenzi we-RAD140 (Testolone) wempuphu?
RAD140 powder i-modolator ye-androgen receptor (SARM) ye-nonsteroidal. Ivuselela i-androgen receptors kwithambo kunye nemisipha enobudlelwane obukhulu kunezo zitho zozala.
I-androgen receptor (AR) ngokuyinhloko iithagethi eziqhelekileyo zophuhliso lwezesondo zabantu, kodwa ukusetyenziswa kwayo ngamacandelo (njenge testosterone) kwonakalisa ithambo, isistim, isibindi kunye nenkqubo ye-nervous central.
Iingxaki phakathi kwimiba yezokwelapha kunye nokwakhiwa komzimba kukuba ukusebenzisa i-testosterone ukuvula ukubonakaliswa kwe-AR ukwenzela ukwandiswa kwemisipha kunye nokuphuhliswa kwethambo kuchaphazela izicubu zesini, okubangelwa kwi-atrophy ye-testicular, i-clitoris eyandisiweyo kubasetyhini kunye nemingcipheko yomhlaza wesibeletho.
I-RAD140 powder iyakhethwa ngenxa yeendlela ezahlukahlukeneyo zamaprotheni asebenzisana ne-androgen receptor kanye ne-RAD140 powder ebophayo. Amaseli ahlukeneyo aya kuphendula kwi-RAD140 powder ebophayo ngokukhupha iiprotheni ezahlukeneyo. Iiprotheni zingaqalisa okanye zivimbele imiphumo ye-RAD140 powder kwi-androgen receptor. Oku kubangela ukuba kuphela i-androgen receptors isebenze kuwo wonke umzimba, kodwa kungekhona yonke.
Isakhiwo se-RAD140 powder nayo iyingqayizivele kwaye ayifani nesakhiwo steroidal sezinye i-hormone ezinjenge testosterone. Oku kunenzuzo kuba kuthintela ukuguqulwa kwe-RAD140 powder ibe ngamanye amahomoni angasebenza kwiindlela ezingathandekiyo.
I-RAD140 powder ivuselela amathambo kunye nezihlunu xa zivimbela iprotrate kunye ne-vesicles ye-seminal, enobangela wokuveliswa kwesilisa. Ukongezelela, i-RAD140 powder ayinyukisi i-enzyme yesibindi kwaye ithathwa njengento enobungozi obuphantsi kwiirati.
I-RAD140 powder nayo iyenze i-androgen receptors esebenzayo kwimimandla yengqondo eyalimala, njenge-hippocampus, kwiiliti. Isebenza iindlela ezithile zemvelo (i-MAPK umzila) ophucula impilo yamaselula kunye nokusebenza.
7. Yintoni i-powder RAD140 esetyenzisiweyo
I-RAD140 yokwakha umzimba
Ukudala umzimba ophelileyo kungaba ngumsebenzi onzima. Abaninzi bomzimba kunye nabathandi bempilo baye basebenzisa ukusebenzisa i-anabolic steroids ezifana ne-testosterone ukwenzela ukuba banikeze inzuzo ngokukhawuleza. Into enye iyinyaniso: i-testosterone isebenza. Yakha isisipha ngokukhawuleza kwaye isantya ukuphucula njengento enye. Ngelishwa, i-testosterone nayo inefuthe leempembelelo kwaye kufuneka ijojowe rhoqo. Kuthekani ukuba kukho indlela yokuphumeza imiphumo efanayo ye testosterone ngaphandle kwemiphumo emibi? Ngoku kukho, kwaye ikhona kwi-SARM ebizwa ngokuba yi-RAD140 powder.
Kukho into eyaziwa ngokuthi yi-SARM leyo kwiminyaka embalwa edluleyo ibe ngumkhiqizo wokuzikhethela kubakhi beqela abazinikeleyo. Yilapho i-RAD 140 ingenza umehluko omkhulu. Nangona kukho abantu abanokuzithemba abangenakho ngokuvisisana ngokupheleleyo nento enikezelayo, baninzi abanomzimba abayifumana isiluleko esinomdla kakhulu.
I-RAD140 powder iyinqobo ye-amoolic receptor modulator, engekho i-nonsteroidal i-receptor modulator ye-nonsteroidal, oku kuthetha ukuba inika imiphumo efana ne-anabolic steroids kodwa ngaphandle kwemiphumo emibi-ngokuyinxalenye ngenxa yendalo ekhethileyo eyenziwa ngayo kwimisipha ngaphezu kweminye imiba yomzimba.
I-RAD140 (i-Testolone) i powder iyanda imisipha. I-RAD-140 ayinelanga nje ukunyusa inzuzo ye-muscle kubantu abayithathayo kodwa yenza ngokukhawuleza. Umzekelo, abadlali abaninzi kunye nabazimba bomzimba basebenzise i-RAD-140 ukuze baqhube umgca phakathi komjikelezo wabo we-steroid okanye umjikelezo weprohormone, kuba uvumela ukuba basebenzise i-testosterone phakathi kwemijikelezo ye-anabolic steroid ngaphandle kokulimaza izibindi zabo kwinkqubo. Ngoko ukuba babedla ukuxhaswa okanye ukunciphisa amandla phakathi kwimijikelezo ye-steroid, bangathatha i-RAD-140 phakathi kwale mijikelezo ukuze kugcinwe amandla okwakhiwa ngelixa udibanisa ubuninzi, bonke ngaphandle kwemiphumo yemveli ye testosterone
Abantu bancedisa nge-RAD140 ingxelo ye powder ukulahleka /ukuhla ukusinda ixesha elide, kodwa uphando lwekliniki aluzange lubonise oku. I-RAD140 i powder inganciphisa ngokukhawuleza izicubu ezinamafutha ngokunyusa imisipha, okwenza ukuba izigulane zikhangele ukunciphisa ubunzima ngaphandle kokuphazamisa ubunzima bomzimba.
Iyenjenjalo ngokunciphisa i-molecule ehambayo ebizwa ngokuba yi-low-density lipoproteins (LDLs). Ukuba nemilinganiselo ephakamileyo yobunzima be-muscle inokunyusa ukwanda kwemetabolism kwaye iqhube ngakumbi ukukhuthaza ukulahleka kweethambo zesifo.
-Nciphisa iziphumo eziphambili ze testosterone
Xa kuthathwa ngokubambisana ne-anabolic steroids, uphando lokuqala luye lwabonisa ukuba i-RAD140 powder iyanciphisa imiphumo emibi ye-testosterone ukuvuselela kwi-prostate kunye ne-vesicles vesicles yeenkwenkwezi.
Ukongezelela, abaninzi abasebenzisi be-anabolic steroid babika inkxalabo kwimpilo yesibindi sabo. Nangona kunjalo, ngethuba le-28-day trial le nkwenkwe zibonise ukuphakama kwe-enzyme yesibindi kwi-dose ye-10x ephezulu kuneyona dose esebenzayo ngokupheleleyo, nangona ubunzima bube bufumene ngexesha elifutshane (okubangela ukunyuka kwesibindi).
Zethu iingcebiso? Ngeziphumo ezivela kwi-RAD140 powderRAD140 powder iziphumo sele sele ibonakalisa ingcono kune-anabolic steroid usetyenziso, abasebenzisi bangcono xa belibala i-testosterone kunye nokunamathela kwi-SARM.
- Iipropati zokuhlala
Oku kwaziwa ngabantu abambalwa: i-testosterone kunye ne-DHT banamandla okwemvelo abaneempembelelo ezilungileyo kwimpilo jikelele e-neural kunye nokugcina i-neurons. Ngenxa yoko, akumangalisi ukuba ezininzi iintlungu ezibangelwa yi-neurodeergenerative, kuquka ne-Alzheimer's disease, zenzeka kulabo abane-androgenic. Sekunjalo, ukusebenzisa i-dose ephawulekayo ye testosterone kungabangela ezinye izingozi zempilo njengoko ziza kubangela iziphumo ezithile. Okwangoku, kusekwe ngokwesayensi ukuba i-RAD140 powder isebenza nemiphumo efanayo engqondweni, okwenza kube yinto ekhethekileyo efanelekileyo yokuthintela izifo ezingenayo i-neurodeergenerative. Ukongezelela, ukufa kwesisele kuya kuncitshiswa ngokugqithisileyo nge powder RAD140 emva kokuxhatshazwa. Nangona ezi zakhiwo ezikhuselweyo ze-neuro zithatha inzuzo ngokukhawuleza ngenjongo yokwakha umzimba, ziyimpawu ezamkelekileyo.
-Tyelela umdlavuza weCarcer Brease
I-RAD140 ipowder yafunyanwa kwaye iqhutywe yile nkampani yerhwebo ye-Radius ngokukhethekileyo kunyango lwe-Androgen Receptor (AR) kunye ne-Estrogen Receptor Positive (ER ER +).
Izifundo ze-in vitro ezigqitywe kwi-2017 zibonise ukuba i-RAD140 powder yayinqande ukukhula kweeseli zebele ze-AR / ER + zebele. Iziphumo ezivela kulezi zifundo zisekele uphando olongezelelweyo lwe-RAD140 powder (iziphumo ze-RAD140 powder) njengonyango lomhlaza webele, kwaye izilingo zokuqala zonyango zihanjiswe phambili.
-Ukufa kweeNtshontsho kwiSithili
Nangona kusekho iintsuku zokuqala kukho iingxelo ezikhuthazayo kwimixholo. I-RAD 140 iyaziwa ukuba yenze umphumo ofanayo kunye nowe-testosterone kwingqondo kwaye ngoko ke, unokukwazi ukuphendula ngexesha elizayo malunga nokuphathwa kwezifo ezahlukahlukeneyo ezenza izifo ezingenayo i-neurodeergenerative. Ukubunjwa kunokunciphisa ukufa kwesisele ngokubaluleke kakhulu, okuqhelekileyo kwenzeka emva kokuba umntu ehlaselwa isifo. Ukunceda ukuzalwa kweseli kunye nempilo yeseli nayo iyafana nesakhiwo se-muscle kwaye ngoko ke inezona zibonelelo ezimbalwa. Ngako oko nangona kukho abantu abangabakhi bomzimba kodwa bebuhlungu bezinye iintlobo zezifo ezingenayo i-neurodeergenerative, ngokuqinisekileyo kuya kuba yindlela eyamkelekileyo.
Ukuququmbela, RAD140 iifowuni zezi:
-kunyanzela ukunyamezela, isivinini kunye namandla ngexesha lokusebenza ngamandla;
- isisombululo esifanelekileyo sesisipha esingenasiphelo ngaphandle kwexesha elihle;
ukubeka ithoni ngokubanzi yendalo;
-nokusebenza ngokufanelekileyo kwizondo zombini;
-kuvelisa ukujikeleza kwegazi
-Ithintela umonakalo we-biochemical and physiological neuronal;
-I-NOT ichaphazela ibhalansi ye-hormonal;
-Asinempembelelo embi kwisibindi;
-AWAKHO unemiphumela emibi engalindelekanga.
-Abantu abanesiseko se testosterone ngenxa yemicimbi yezempilo, okanye ukusetyenziswa kakubi kwe-anabolic steroids ngaphambili.
-Abodybuilders abafuna ukuhambela phakathi kwimijikelezo ye-steroid (umjikelo we-RAD). Cinga ukukwazi ukusebenzisa i-testosterone phakathi kwimijikelezo yakho ye-anabolic steroid ekhoyo ngaphandle kokukhathazeka ngokuxhatshazwa nokulimaza i-HPTA yakho. Oku kuya kukuvumela ukuba ugcine amandla amaninzi kwaye uhlambulule umjikelezo oye waba nawo ngaphambili.
-Abantu abafuna ukusebenzisa isicatshulwa sokwenza imveliso, kodwa banenkxalabo yeziphumo ezibi. Kwimeko enjalo, umntu unokujikeleza i-RAD140 powder (umjikelezo we-RAD140 powder) endaweni ye-anabolic steroids kwaye ungakhathazeki malunga nokuvalwa okanye imiphumo emibi yezempilo eyenziwa yi-steroids.
-Abantu abanomdla kwi-gynecomastia. I-RAD140 powder ifana nokusebenzisa i-testosterone, kodwa ngaphandle komngcipheko weempembelelo ze-estrogenic ngenxa yokuba ayifuni i-estrogen. Ngoko ke, ukuba isiseko se testosterone siyadingeka ngexesha lomjikelezo, i-RAD140 powder ingasetyenziswa ngaphandle kokwesaba ukufumana i-bitch tits okanye ukubetha.
9. I-RAD140 powder iqhathaniswa ne testosterone
testosterone kuthathwa njengesiqulatho esifanelekileyo sethemplate ngokwemiqathango ye-androgenic kunye ne-anabolic yamacandelo ahlukeneyo, apho umlinganiselo we-1 [00: 10] 0 ngowona siseko. Kule nkalo, i-RAD140 powder inomlinganiselo omangalisayo we-90: 1. Oku kuthetha ukuba phantse njenge-anabolic njenge-testosterone, kodwa ayikho imiphumo ye-androgenic, into ebalulekileyo kakhulu, ekubeni ezininzi iziphumo ezichaphazelekayo ekusebenziseni i-steroid zivela kwimiphumo yazo ye-androgenic.
Ukongeza kuloo nto, kuye kwagqitywa ukuba uza kufuna i-40% ngaphezulu ye-testosterone yokukhula komzimba njenge-RAD140 powder, kodwa kuya kuthatha amaxesha e-60 ngaphezulu kwipowula ye-RAD140 ukuqala ukubonisa nayiphi na imiphumo echaphazelekayo.
Ngokubhekiselele ekuthandaneni kunye ne-androgen receptors, uphando lubonise ukuba lune-30% yobudlelwane obubonwayo kunye ne-testosterone, kwaye phantse ukulingana okufanayo njenge-dihydrotestosterone (DHT).
10. Indlela yokusebenzisa i-RAD / Testaoone, i-RAD140 powder dosage
Ininzi i-RAD140 ipowder ifika ngokulula ukusebenzisa ifom ye-liquid, ungasebenzisa i powder RAD140 emlonyeni wakho ngeglasi okanye i-plastic dropper. I-RAD140 ifowuni yefowuni ifanelekileyo kubasebenzisi abafuna iziphumo ze-anabolic ze-testosterone, kodwa zisoyike iigciwane okanye ama-creams okanye ama-gel.
Xa ufaka i-RAD140 ifom ye-powder emlonyeni wakho, qinisekisa ukuba uyayigwinya kuqala kwaye uyilandele ngeglasi yamanzi. Kubalulekile ukukhumbula ukuba xa uvula i-powder ye-RAD140, kufuneka uyisebenzise ngosuku olufanayo.Akumele kube lula kuba unyuselwa ukuba uthathe i-RAD140 ngosuku ngokufumana inzuzo efanelekileyo.
Ukuba ucinga ukuthabatha i-RAD140 powder, uya kufuna ukwazi ukuba i-RAD140 ifowuni ye-powder / i-Testolone powder ifayili ukuthatha. Inkampani yeAASraw (Abaxhasi be-powder RAD140) uncoma ukuthatha i-RAD140 powder dosage ngosuku / i-Testolone powder dosayo phakathi kwe-20mg kunye ne-30mg. Njengenkampani ye-AASraw (abaxhasi be-RAD140 powder) njalo bathi, inkampani ye-AASraw icebisa ukuthatha i-RAD140 powder dose / Testolone powder dose kwiveki yokuqala ukubona indlela umzimba wakho uphendule ngayo. Eninzi ayilona ilungile xa ifika kumaSARM. Yenza i-10mg i-RAD140 i-dose dose / i-Testolone powder dose ngosuku ngeveki yokuqala, kwaye ukuba kulungile, unako ukwandisa umlinganiselo we-RAD140 powder / testolone powder. Ngenxa yokuba i-Testolone powder / i-RAD140 powder ilungile emzimbeni, kodwa akudingeki uthathe i-RAD140 (Testolone) powder ngaphezu kwe-12 yeveki. Ukuba ungathanda, emva kokuthatha ikhefu kwiiveki ze-4-12, unokuziqalisa kwakhona ..
Nangona bekungekho mpazamo ukuchaza ukuba i powder RAD140 (Testolone) ayinakho ngokupheleleyo kwi-RAD140 nemiphumo emibi yemiphunga / i-Testolone nemiphumo emibi, bobabini abaphandi kunye nokuphelisa abasebenzisi be-RAD140 powder / Testolone powder abonakala bengakhathazeki malunga ne-RAD140 powder Imiphumo emibi / i-Testolone side effects. Ngokwamaninzi, enye ye-PED ekhuselekileyo okanye Ukuphucula ukuSebenza kwezidakamizwa ezikhoyo kwimarike namhlanje. Mhlawumbi enye yeemveliso ezimbalwa zokwakha imisipha kwiimarike ezingayi kubangela naluphi na uxinzelelo. Ukongezelela, yenye yeemveliso ezimbalwa ezithe zazingekho naluphi na umphumo. Le ngxaki enkulu kwininzi ye-steroids eye yanyamekelwa ngokwaneleyo ukuya kwi-RAD 140.
12. I-RAD140 i-powder isiqingatha sobomi / i-Tesolone ihafu yesibini
I-RAD140 ipowder isigxina ubomi /I-testolone powder isiqingatha sobomi I-16hours.RAD140 i-powder isiqingatha ubomi / i-Tetolone ubomi besiqingatha ayicatshangwanga imfutshane ngaphandle koko ithetha.Kodwa abasebenzisi be-RAD140 powder / abasebenzisi be-Tesolone banokukhetha ukuthatha isigamu se-RAD140 powder dosayo / i-Testolone powder dosage ekuseni kunye nengxenye eseleyo ebusuku. Ukuphalaza i-RAD140 i-powder dose / i-Testolone powder dose efana nale iya kuqinisekisa ukuba ufikelela kwinqanaba le-plasma.
13. Uphando lwe-RAD140 powder / uphando lwe-Testolone powder
Kwizifundo ezibandakanya i-RAD 140, ebizwa ngokuba yi-Testolone powder, uvavanyo lwaluqhutyelwa ikakhulu kwiinkwenkwezi kunye neigundane. Ngakolunye uhlangothi, iziphumo zale RAD140 uphando oluphambili lwepowder / uphando lwe-Testolone powder luboniswe ukuba luqinisekile. Ngokomzekelo, kuboniswe ukuba i-RAD 140 inepropati eyingqayizivele yokulwa neprothetti yokwandiswa ngenxa yokusetyenziswa kwe-testosterone, ekuncedeni ukuba yenze i-agent yokubamba i-Androgenic ekhethekileyo engabangela ukuba kubekho umphumo / umphumo ongathandekiyo.
Ukongezelela, xa i-Testolone powder yanikezelwa kwiinkwenkwe, kwakukho ukunyuka okubalulekileyo kwisisindo esinyameko ngexesha lonke likaRhulumente. Olu konyuka kwinqununu elixhomekeke lixhomekeke, ngoko ke ngamayeza amakhulu kwakukho ukwanda okwenziwe ngokwengeziwe kwimizimba eninzi kunye nokuntuleka kwamathambo e-fat. Ngenxa yoko, i-Testolone powder yi-SARM yinyani kunye nazo zonke iipropati ezilindelwe kumxube kunye nohlobo lokhuseleko nokusebenza.
14. I-RAD140 powder ngaphambi nangemva
Xa usebenzisa i-RAD140 powder, kungakhathaliseki ukuba ukhangele ukwenza umjikelezo wokukrazula okanye ukusika, uya kufuna ukubona i-RAD140 powder eluhlaza ngaphambi nangemva komfanekiso ukwazi ukuba iziphumo zilindele ntoni kwi-RAD140 (Testolone) powder. Senza uphando oluthile lwezakhiwo zomzimba oludumile kunye neefom yeempilo, i-reddit (i-RAD140 powder reddit) ukubona ukuba luphi uhlobo lweziphumo abantu abafumanayo kwiimjikelezo zabo, nakwiinkampani ze-AASraw (i-RAD140 imithombo yamanzi ekhulayo) ingxelo yeklayenti, iziphumo, njengoko uza kubona, zihle kakhulu. I-Bellow yilapho i-RAD140 powder ngaphambi nangemva kwekiso-mifanekiso kubhaliso. Njengoko ungabona kwi-RAD140 powder eluhlaza ngaphambi nangemva kwemifanekiso, abasebenzisi be-RAD140 be-powder bafumana iziphumo ezintle kakhulu ekusebenziseni i-SRAM.
15. I-RAD140 ipowder powder neYK11
Kwiimveliso zechungechunge lweSARM, yonke into endiyiva ngayo le mveliso emitsha ukubetha kwiimarike kwaye yenza ukuba uzibuze ukuba ngaba yinto ezayo nje okanye ukuba ngaba ngokwenene baneempembelelo ezivakalisiweyo eziphandwayo. Sibheke malunga neforum yobuqili, uRAD140 i-red powder reddit kunye neengxelo zabathengi abathile, abanye abantu basebenzisa i-RAD140 ipowder powder kunye neYK11, kwaye bafumana iziphumo ezibi kakhulu!
Akayena u-newbie ukuncedisa nayiphi na uhlobo, uye wazama uCardaine (GW501516), i-Orstarine (MK2866), i-MK677, i-SR9009, kwaye isetyenziselwa i-RAD140 ipowder powder ekhompyutheni kunye ne-YK11 yokugqibela ye6week. Uyathenga i-RAD140 powder (i-Testolone powder) kwi-intanethi, kwaye ithumele isampuli kwibhulethi yeqela le-3rd ukuvavanya kwaye ibonise ubungcwele beemveliso.
Xa athe wagqiba ukubeka i-RAD140 powder eluhlaza kunye neYK11, akazange afunde ngale ngxube ethile nayiphi na indawo, nangona wafunda kwi-2 eyahlukeneyo ye-SARMS powder. Yayiyakhe ingcamango yokubeka i-RAD140 powder kunye ne-YK11 kunye kwaye ngokuqinisekileyo yibona oko kuza kwenzeka ngolu hlobo. Nanku amava akhe.
Waqala nge-15mg ngosuku lwe-RAD140 powder kunye ne-10mg ngosuku lwe-YK11. Wathatha enye i-dropper epheleleyo yento yokuqala yokuqala ekuseni kunye nesidlo sasekuseni. Kodwa inkokhelo yokuhlawula yonke into kwaye ukuba intengo yobukhulu kunye nokuqina kwamandla yinto engalunganga nje imizuzwana embalwa kwaye iyakwazi ukujongana nayo.
Emva kokuba athathe i-RAD140 ipakishe yepowder eluhlaza kunye neYK11, waya kwi-gym waza wahamba ngendlela yokuqhelekileyo yokuqhuba umsebenzi kwaye akazange acinge nantoni na into ayisebenzisayo. Njengoko uhamba kwi-TRT (itystyrinone esikhundleni sengonyango) ngokugqithiseleyo ugqirha, ngokunjalo nangokuqala, uyathemba ukuba ingavelwanga iimveliso ezijolise ekunyuseni amanqanaba e-testosterone aze amsebenzele.
Kodwa ukungazithembi ayenayo okokuqala kuphele emva kokufumana imiphumo yale SARMS. I-3 emva kwenyanga, wabona ukuba amandla akhe ayaphumelela nangona kungekho zinguqu zokutya okanye i-caloric.Kodwa, wacinga ukuba mhlawumbi le yinto ethile ye-placebo okanye i-fluke kwaye yayingakulungele ukuyifaka kwi-stack ye-SARMS.
Emva kweveki ye-1 kwi-stack, i-thre yayingabikho mbuzo! Amandla ayehamba ngephahla ngokukhawuleza kwaye wayesele ephakamileyo. Waqaphela ukuba akukho kubhobhoza. Ngoko waqhubeka eqongeni.
Ngeveki yesibini wayebetha nge-ewights njengokuba bebengakhangeli. Ndenza umshini wokugada wamatye kunye ne-7plates kwicala × 12 reps, into ayengakaze yenze ngaphambili.
16. I-RAD140 ipowder review
Kukho iziphumo ezifanelekileyo zokubonisa ukuba i-RAD 140 yenye yezona zinto zifumene ixesha elifutshane. Mhlawumbi i-trendsetter enkulu ukuya kwiSARM. Inayo yonke into ephawulekayo yokuba yomelelo elinamandla kunye elinamandla. Ingaba yimpendulo epheleleyo yokwakha imisipha kunye nokukhuthaza amandla. Ukuba ukhangele loo nto ikhutshwe ngomzimba ingaba yimpendulo. Ngakolunye uhlangothi lwengqungquthela, kuya kuba yinto emangalisayo kwimisebenzi eyahlukeneyo yezobisi. Ukusetyenziswa kwayo ekuphatheni izifo ezahlukahlukeneyo ezinomdlavuza ngokwenene kunomdla kwaye ngokunjalo ukukwazi ukulwa nokufa kweeseli eziqhelekileyo ezenzeka rhoqo xa umntu elwa nesifo.
17. Thenga i-RAD140 powder (Testolone powder) ipowder evela AASraw
Ndicinga ukuba uyavuma ukuba igama elithi "likhemikhali yophando" lijikisa abanye abantu. Kuzwakala kungacacile ngokufanelekileyo kwaye kunomthunzi ngakumbi. Kodwa ngokwenene, akukho nto yokwesaba; lonke ixesha libhekiselele ukuba i-FDA (Ukutya kunye noLawulo lweDrug) ayifumanga njengemithi yokwelapha.
Kukho amakhulu xa kungekhona amawaka ezongezelelo zendalo ezisebenza ngokukhuselekileyo nangempumelelo njengemveliso yezobisi (ukuba akunjalo) kwaye akukho namnye kubo avunywe yi-FDA. Ukuba uya kwivitham ehambayo ye-Rite Aid yakho yasekhaya, uya kufumana amaninzi amaninzi kunye nezixhobo eziphathekayo eziphethe ileyibhile yokuxwayisa ukuba ayifumanekanga i-FDA. Athetha nto.
Kwimeko ye-SARM, uninzi lwabo bafumana inxaxheba phakathi kwezemidlalo kunye nabadlali bomzimba ngenxa yokuba yindlela ekhuselekileyo kwi-anabolic steroids eyingozi.
I-RAD-140, igama elibizwa ngokuthi yi-Testolone powder, linokuthengwa kalula kwi-intanethi i-RAD140 ipowusi eluhlaza (I-RAD140 powder yokuthengisa)
Uphando luye lwabonisa ukuba i-RAD-140 isenzo kwiimvumi ze-androgen ezikhethiweyo kuphela kwiimisipha kunye neethambo zixelisa i-hormone receptors ezifana ne-testosterone ngaphandle kwemiphumo emibi ngenxa yezenzo zokukhetha. Ngaphandle kwenyuka ngokukhawuleza ekwakheni izicubu zeengcambu ze-muscular zibonise i-RAD-140 ibonisa ukunyuka okunamandla kwintlambo kunye nokunyamezela ngexesha lokuzivocavoca okukhulu ukuhamba kunye nokunyuka okukhulu kwindlela yokubuyisela imisipha. Ucwaningo luye lwabonisa ukuba i-RAD-140 ineempembelelo ezinkulu ze-anabolic kune-testosterone kuba ivelisa iziphumo ezingakumbi ngaphandle kwemiphumo emibi kwaye zinkulu kulabo abadinga unyango lwe-hormonal. I-RAD-140 nayo ibonise ukugcina i-neurons engqondweni kunye neepropati ze-neuroprotective ezifana ne-testosterone kwaye inenzuzo enkulu kulabo abanezifo ezivakalayo. Ukuququzelela yonke into ku-RAD-140 yi-SARM enkulu yokunyuka ngokukhawuleza kokukhula kwemisipha, ukuphucula ukunyamezela, nokwandisa ukusebenza kwezemidlalo.
Thenga i-RAD140 ipowusi eluhlaza (i-RAD140 powder yokuthengisa) ukusuka kwinkampani ye-AASraw (imithombo ye-RAD140 imithombo ye powder), ungayifumana i-RAD140 powder ngokukhuselekileyo.
Thenga i-Powolone powder for building body: imiphumo ye-RAD140 uyadumazi Thenga i-RAD140 powder online: Iifayili ze-8 kufanele wazi !!!
tags: athenge i-RAD140 powder, bathenge iPololone powder, RAD140 powder, I-testolone powder
Thenga Ubungakanani beYK11: Iingcebiso kunye neziNzuzo kunye nemiphumo emibi	Iinzuzo zokusebenzisa i-MK-677 (Ibutamoren) ipowder yokwakha umzimba